बन्द उद्योग सुचारू गर – Chitwan Post
बन्द उद्योग सुचारू गर
देश विकासका लागि पहिलो सर्त भनेको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि गर्नु हो । नेपालीको आयस्रोत नबढी देश विकास सम्भव छैन । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आकर्षक नारा तय गरेको छ । नारा सुन्दा यति आकर्षक लाग्छ कि योभन्दा उपयुक्त अर्को शब्द नै भेटिँदैन । तर, आकर्षक नारा तय गरेरमात्रै देश समृद्ध भइहाल्ने अनि नेपाली सुखी हुने पनि कदापि होइन । त्यसका लागि राज्यले ठोस नीति बनाउनुपर्छ । देशमा पर्याप्त उद्योग, कारखाना खोल्ने, जनताको सीप र क्षमताअनुसार रोजगार दिने नीति अख्तियार गर्न सके बढ्दो बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ । यतिमात्रै होइन सिंगो गाउँ नै रित्तो पारेर कोही पनि सामान्य कामका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । देशमा कृषि उत्पादनको घट्दो उपक्रमले धान–चामल, तेल, तरकारीदेखि प्रायः सबै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने नियति छ । देश विकासको मेरूदण्ड मानिने उद्योग कलकारखानाको स्थिति यस्तो दयनीय छ कि नयाँ उद्योग खोल्ने रणनीति त सरकारसँग छैन, भएका उद्योग कलकारखाना पनि बन्द भएर थन्किएका हालतमा छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा पटाक्षेपजस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले कृषि उत्पादनमा केही राहत प्रदान गरेको छ । केही जिल्ला पोल्ट्री, दूध, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका पनि छन् । एकाध ठाउँलाई छाडेर जनताको दैनिक जीवनमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रयोग हुने खाद्यवस्तुमा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ भने औद्योगिक उत्पादनले विकास । तर, सरकार औद्योगिक उत्पादन बढाउनेतर्फ लागेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि हरेक मन्त्रीहरु समृद्धिको भाषण गरिरहँदा सरकार गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै उद्योग खुलेको छैन । मेट्रो रेल, पानीजहाज र घरघरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास पु¥याउने सपना बाँड्ने सरकारले दशकौँदेखि बन्द हालतमा रहेका सरकारी प्रतिष्ठानलाई किन खुलाउन चाहँदैन ? यतिखेर सरकार मातहतका उद्योगहरु त्यति चलायमान छैनन् । कतिपय सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु नाममात्रैका छन् । अर्बौ मूल्य पर्ने प्रतिष्ठानका मेसिन तथा पार्टपुर्जाहरु खिया लागिसक्दा पनि इतिहासकै बलियो सरकारले चलाउने प्रयास गरेको छैन । एउटा गतिशील सरकार सरकारी प्रतिष्ठानको यस्तो दुर्गतिबारे मूकदर्शक बन्न सक्दैन र मिल्दैन पनि ।
सरकार मुलुकमा दिगो आर्थिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फभन्दा पनि जनतालाई अनावश्यक कर लादेर शासन थोपर्न उद्यत छ । दैनिक १६ सय युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहँदा सरकार बन्द उद्योग खुलाएर नेपालकै श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सक्दैन । नयाँ उद्योग नखुल्ने र भएका उद्योगहरुको पनि संरक्षण र संवद्र्धन नगरिँदा न राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ, न त रोजगारीको अवसर नै सिर्जना हुन्छ । सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भजाएर केही मजदुरलाई सडकमा फूल रोप्न, झाडी फाँड्न लगाएर यति र उतिलाई रोजगार दिएको नाटक गरिरहेको छ । जबसम्म उद्योग, कलकारखानाहरु खुल्दैनन्, जनताले देशभित्रै अवसर पाउँदैनन्, बन्द प्रतिष्ठानलाई प्राणप्रतिष्ठा दिइँदैन तबसम्म नेपाली उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नुको विकल्प पनि रहँदैन । आज सरकारले किन देखिने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन ? बेथितिले किन पराकाष्ठा नाघेको छ ? भ्रष्टाचार किन मौलाएको छ ? सरकार अहिले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान् गरेर समय बर्बाद गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेकाहरुले किन लगानी गरेका छैनन् ? सरकारले आफूसँग जे छ त्यही स्रोत परिचालन गरेर, जनतालाई शेयर आह्वान् गरेर उद्योग खोल्न सक्नुपर्छ । समृद्धिको नारा लगाएर होइन बन्द भएका प्रतिष्ठानहरु सुचारू गर्न सकिएमात्र नेपाल समृद्ध बन्नेछ ।
बढ्दो सम्बन्धविच्छेद : विखण्डनतिर समाज
चार स्थानमा बम, दुई गाडीमा आगजनी